कहाँबाट आउँछ प्रियंका कार्कीलाई इनर्जी ? « THE CINEMA TIMES
द सिनेमा टाइम्स काठमाडौं –अभिनेत्री प्रियंका कार्कीलाई आरोप आउने गर्छ – धेरै फिल्ममा अभिनय गरेको , उस्तै अभिनय दोहोरियो । तर उनका फ्यान फलोइङ हेर्दा छोटो समयमा निकै फ्यान कमाएकी अभिनेत्रीमा प्रियंका नै पर्छिन् । पछिल्लो समयकी व्यस्त नायिका प्रियंकाले फिल्ममात्र भ्याएकी हुँदिनन् । उनका म्युजिक भिडियो पनि उत्तिकै रिलिज भएका छन् । अझ पछिल्लो केही समयलाई हेर्ने हो भने उनी रियालिटी शो ‘बुगी उगी’ मा पनि व्यस्त देखिइन् । अर्कातिर ‘छक्का पञ्जा ३’फिल्म ‘नाईं नभन्नू ल ५’को छायांकनमा पनि उनी पुगेकै हुन्थिन् ।
गएको वैशाखमा एकसाथ रिलिज भएका चार फिल्ममा पनि प्रियंकाले प्रचारका लागिसमय छुट्याएकी थिइन् । सबै फिल्मलाई समय छुट्याउने र प्रचारमा पनि खटिने उनको यही भावनाले निर्माता निर्देशक अचम्ममा पर्छन् । शायद उनको यही कारणले हुनुपर्छ, प्रियंकासँग काम गर्दा धेरै निर्माता निर्देशकलाई सहज लाग्छ भन्ने गर्छन् । पछिल्ला वर्ष धेरै फिल्ममा अभिनय गरेको भन्ने आरोप खेपेकी प्रियंकाले आखिर कसरी मिलाउँछिन् यत्रो समय ? फिल्मको छायांकनमा पनि उनी पुगेकै छिन् । प्रचारमा पनि उत्तिकै समय दिएकी नै छन् ।
जुन धेरैका लागि सामान्य कुरा होइन । त्यो समयको कुरा हो, उनी आफ्नो व्यस्त समयका बावजूद उनी ‘नाइँ नभन्नू ल ५’ को ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा उपस्थित थिइन् । उक्त कार्यक्रममासबैको आँखामा परेकी प्रियंकालाई इभेन्ट भ्याउनासाथ अर्को कार्यक्रममा पुग्नुपर्ने थियो । फिल्ममा आमाको भूमिका निभाएकी प्रियंका कार्यक्रममा ‘हट’ बनेर आएपछि पत्रकारले सोधे – फिल्ममा आमाको भूमिकामा देखिएकी प्रियंका हट देखिइन् भनेर फ्यानले भन्ने भए है ? ‘यहाँबाट सिधै म एउटा कार्यक्रममा जानु छ, त्यही कारणले पनि यही पोशाकमा आएँ ।’, उनले भएर मुस्कुराउँदै उत्तर दिइन् ।
कामप्रतिको प्रियंकाको यो लगावलाई सबैले सम्मान गर्छन् । सकभर सबैसँग राम्रो बन्न चाहने उनको बानी कतिपयका लागि प्रेरणा समेत बन्ने गरेको छ । उमेरले बिस्तारै पार लाउँदै जाला, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर अहिले उनमा देखिएको जुन जोश छ, त्यो सामान्य जोश भने पक्कै होइन । उनको नेपाली फिल्मप्रतिको चासो र त्याग साँच्चिकै सम्मान गर्नलायक भएको उनी निकटका फिल्मकर्मी बताउँछन् ।
नेपालमा कामको सूची छ, जुन उनलाई भ्याउनु छ । अर्कातिर विदेशका कार्यक्रममा पनि उनी उत्तिकै व्यस्त हुन्छिन् । यो जोश र जाँगर देख्दा धेरैलाई लाग्छ कि, कति जाँगर चलेको हो?फिल्मदेखि प्रचारसम्म, देशदेखि विदेशसम्म, म्युजिक भिडियोदेखि रियालिटी शोसम्म छाएकी प्रियंकाको समय व्यवस्थापनबाट अरुले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने देखिन्छ । केही हप्ता अघि प्रियंकाले नायक आयुष्मान देशराज जोशीसँग इंगेजमेन्ट गरेकी छन् । इंगेजमेन्ट लगत्तै अमेरिका पुगेर आएकी प्रियंकालाई अहिले पनि कामको उत्तिकै दौडधूप छ ।प्रियंकाका निकटका साथीहरु भन्छन् – ‘त्यही त, अचम्म लाग्छ, थकाइ पनि लाग्दैन होला कि यत्रो दौडधूप गर्दा ?’